अर्बपति मन्त्री : करोडौंको शेयर, जग्गैजग्गा, घरैघर ! यो सब कसरी ? कारण यस्तो..? – News21Nepal
अर्बपति मन्त्री : करोडौंको शेयर, जग्गैजग्गा, घरैघर ! यो सब कसरी ? कारण यस्तो..?
तनहुँका पाका कांग्रेस नेता डोबाटे विक मन्त्री बन्ने निश्चित भए पनि उनको सट्टा विन्दुलाई मन्त्री बनाएको भनी कांग्रेसको आलोचना भएको थियो ।अनलाइन खबर बाट साभार
Tags: अर्बपति मन्त्री : करोडौंको शेयर घरैघर ! यो सब कसरी ? कारण यस्तो..? जग्गैजग्गा
Previous एमाले स्थायी कमिटीको निर्णयमा भीम रावलको फरक मत ! कारण यस्तो ?
Next मंसिर ०९ गते, बिहीबार : तपाइँको दिन कस्तो छ ? पाथीभरा माता को दर्शन गर्दै ॐ लेखी ॐ पूरा राशीफल हेर्नुहोस…